I-Apple yokudibanisa amaXwebhu e-iCloud kunye neNkonzo yeDatha nge-ICloud Drive ngoMeyi ka-2022 | Ndisuka mac
Iphephandaba elikhethekileyo kwi-Apple kunye netekhnoloji, IMacGeneration, ipapashe ukuba ngokolwazi olutsha abanalo, iApple iceba ukudibanisa ICloud uxwebhu kunye neenkonzo zedatha ngenkonzo ye-iCloud Drive Oku kudityaniswa kwenzelwe ukuba kwenziwe ngoMeyi kunyaka olandelayo. Ngo-2022, oko kunika abasebenzisi ixesha lotshintsho.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukucacisa iikhonsepthi ezimbalwa. Usenokuba sele uyazi, kodwa ayikaze ibenzakalise ukukwazi ukuyichaza kakuhle le nto sithetha ngayo. Ke, siyazi ukuba iCloud yinkonzo yokugcina ilifu esetyenziselwa iinkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa yiApple. Ngelixa ICloud Drive isebenza njenge-OneDrive, umzekelo, inkonzo engena kwi-iCloud.
Babelana ngesakhono esibalulekileyo sokugcina idatha yesicelo. Nangona kunjalo, amaxwebhu e -Cloud kunye nedatha yayihlala inamava anzima kwaye adidayo. NgokuchaseneyoICloud Drive idityaniswe ngakumbi, kunye nabasebenzisi banokufikelela kwiifayile kunye nomxholo ngokusebenzisa iFayile yeapp kuzo zonke izixhobo zabo.
Ukuqala ngoMeyi kunyaka ozayo, abasebenzisi abasebenzisa amaxwebhu e-Cloud kunye nedatha baya kuthi iiakhawunti zabo zihanjiswe ngokuzenzekelayo ziye kwiCloud Drive. Nangona kunjalo, abasebenzisi kufuneka yenza ngesandla iCloud Drive ukujonga iifayile zakho xa kukho ukudibana. KwiMacs, kuya kufuneka siye Ukukhetha kweNkqubo -> ICloud, kwaye ukhethe iCloud Drayivu kwi-MacOS. Ngo-Meyi ka-2022, uxwebhu kunye neenkonzo zedatha ziya kuyekiswa kwaye endaweni yazo kugqitywe yiCloud Drive.
Inkqubo efanelekileyo kuthathelwa ingqalelo ukuba iFayile App ifuna ukusuka apho sinokufikelela kuyo yonke idatha esinayo kuso nasiphi na isixhobo seApple. ICloud Drive iba kuphela kwendawo yokuhlangana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple yokudibanisa amaXwebhu e-iCloud kunye nenkonzo yeDatha nge-ICloud Drive ngoMeyi ka-2022
IProPods Pro enexabiso eliphantsi ngokwenene